Electric convector Ukushisa nge control thermostatic: indlela engcono ukukhetha?
Ukudala microclimate ukhululekile efulethini noma indlu ngezinye izikhathi Ukuntula zokufudumeza. Njengoba indlela ehlukile, ungasebenzisa heater kagesi, avunyelwe ukufakwa hhayi kuphela amakamelo ophilayo, kodwa futhi nemibandela Cottages, emadokodweni, emagalaji zinsiza.
Kungani ngidinga thermostat
Lungile lokushisa convector ngokusebenzisa Regulator ekhethekile. Umncintiswano Sekuyisikhathi eside wangena central Ukushisa radiators futhi heater kagesi, futhi le mpi kuyinzuzo ukusula lakamuva. Bona ingafakwa kunoma iyiphi indawo ekahle ngaphandle kwaphazamiseka ukuhamba efulethini. onobuhle yamanje kalula alingeni kunoma yiziphi ingaphakathi. Lokhu akulona amanzi noma kagesi kurediyetha, okuyinto kwesinye isikhathi kungabonakala nzima.
Amapharamitha Ukukhetha convector kagesi
Electric convector Ukushisa nge control thermostatic Kufanele kukhethwe ngokuvumelana nemingcele ethile, kubalulekile ukuhlukanisa phakathi kwabo:
ukushintshashintsha Ukushisa isici;
uhlobo lokushisa isilawuli;
Funda kabanzi mayelana ongakhetha
Njengezinye heater kagesi, echazwe esihlokweni zihlukile, okokuqala kunakho konke, amandla. I umxhwele nakakhulu kuyoba kulungiselelwa, ngokushesha bazokwazi kulungele egumbini imishini. Uma ucabangela kagesi convector Ukushisa ne-thermostat udonga kunconywa ukufunda izibuyekezo. Ngakho, nemibandela imishini ukusetshenziswa ekhaya, amandla okuyinto zokhahlamba kusuka 0.3 kuya ku-3 kW. Ukuze sikhethe kahle, kufanele ibalwe ipharamitha ngamunye. Kukhophi 10 m 2 ibusa 1 kW. Uma kukhona igesi noma amanzi Ukushisa, Ukushisa endaweni efanayo 0.5 kW kuyoba okwanele.
On kukhethwa ithuluzi kwamandla
Ochwepheshe ukweluleka ukukhetha kagesi convector Ukushisa nge control thermostatic ukuze amandla abo futhi lalilikhulu ngo-15% kunanoma endaweni edingekayo egumbini. Ngakho ungasetha ukushuba umsebenzi bese ugcine amandla. Njengoba isibonelo, imishini ephansi amandla ukuzicabangela convector brand BALLU BEC / Ezeri-1000, lapho kuyodingeka ukuthi bakhokhe ukuze 2500 deda. Amandla le divayisi 1 kW. Lokhu kubonisa ukuthi idivayisi lingasethwa endlini, endaweni obuyisilinganiselo 15 m 2. Njengoba ezinye izici kubalulekile ukwaba timer, control electronic kanye thermostat.
Model Ukukhetha indlela indawo
Electric Ukushisa convectors nge thermoregulator kungenzeka phansi, udonga, futhi underfloor jikelele. Esimweni sokuqala sikhuluma imishini, ikhithi okuhlanganisa kubakaki. Uma ufuna ukukhetha iyunithi phansi, ungasebenzisa imilenze namasondo. Izinzuzo-wall units aqukethe e yokuthi izintambo ngeke uthole endleleni, kuyilapho umzimba ngeke isikhala egumbini. Okudingekayo - is ukuqinisa umzimba odongeni bese uxhuma idivayisi kunethiwekhi. zokuphuma Lezi convectors kangcono amafulethi ukuthi Awunaso isikhala kangaka.
Uma uthanda okufushane ongaphandle, iyunithi kuyoba ukuhamba ezahlukene, kodwa uyokwenza njengoba ethile ukuthi imishini esiyoba isikhala. Isibonelo imishini odongeni-agibele amahhashi kungaba imodeli ATLANTIC F117 DESIGN 500W, okuyinto kuyodingeka bakhokhe ruble 3300. Le yunithi odongeni sinesikhundla 500 W futhi kuhloswe ukuba ibekwe, endaweni 5 m 2. Imodi ubhekiswe kungaba nge iyunithi electronic. Ngo ebukhoneni thermostat kanye umnotho imodi kufanele zabelwe njengoba izici ezingeziwe omuhle. Idivayisi ukala kg 3.594 nje, ingafakwa ngisho ahlula ukukhanya.
Ukukhetha idivayisi ngokuvumelana uhlobo Ukushisa isici
Electric convector Ukushisa nge control lokushisa, kungenziwa ifakwe ezahlukene Ukushisa izakhi, okuyilezi:
Inketho yokugcina ilula kakhulu futhi ezishibhile, kodwa ukusetshenziswa kwalo kungaba yingozi, ngenxa isakhiwo uyabaselwa futhi zintekenteke kakhulu. imikhiqizo enjalo, njengoba umkhuba sibonisa, ngokushesha kakhulu wehluleka, ngakho azizivuni izindleko zabo.
A kunokwethenjelwa kukhona heater ijabulise, ezithinta ukubaluleka isilinganiso kunalapho inaliti. Njengoba nje yokuntuleka umsindo izenzo ekuqaleni, ngoba lapho ukufuthelana tube a wokuqhuma kancane. Inketho asele iyona isikhathi eside kakhulu futhi ngempumelelo, kodwa futhi inenani eliphezulu kakhulu.
Njengoba isibonelo idivayisi heater ijabulise ungase ucabangele sha imodeli ELECTROLUX ech / R-1500 E, obiza ruble 4700. imishini Amandla 1.5 kW, futhi ukwazi ukusebenzisa idivayisi endaweni ephakathi kuka-15 m 2. Umklamo isikisela ukuthi timer futhi control unit ungasebenzisa iyunithi electronic. Indaba uba aluminium Ukushisa isici, nesisindo zedivayisi kuyinto 4.3 kg. Lokhu imishini ongaphandle has ekhaliphile control unit, isistimu sokunciphisa umoya lapho zindiza, amakhethini kanye okweqile Ukuvikelwa inzwa. heater anjalo kanye thermostat Ukushisa phansi kagesi kukhona jikelele ngokuya ukufakwa zasendlini, njengoba ingabekwa hhayi kuphela phansi kodwa futhi phezu kodonga. Ukuqalisa isimo yokugcina, umenzi eletha odongeni ephelele ukukhweza.
Model Ukukhethwa uhlobo control lokushisa
Iyunithi thermostat liyadingeka ukuze ivumela umsebenzisi ukulawula ukusebenza kwe-heater. Ngalo ingafakwa lokushisa ekamelweni okufanele inakekelwe phakathi naso sonke isikhathi yokusebenza. Uma ekamelweni kuyoba ukufudumala, isilawuli izovala idivayisi, okuzokwenza onge amandla.
Okwamanje, ungakwazi ukuhlangabezana convectors nomunye ezimbili izinhlobo amath-. Kungenzeka ngogesi noma mechanical. Ukukhetha udonga convector kagesi Ukushisa nge control thermostatic, kuye izindleko namakhono. Ngokwesibonelo, mechanical lokushisa abalawuli kukhona engabizi futhi ube ukwakhiwa elula. Ukushintsha izinga lokushisa kungaba nge inkinobho esiteji. Ububi kuphuma esaphila futhi lokushisa iphutha short, okuyinto ngezinye izikhathi ifinyelela 3 ° C. Inzuzo ukuthi ezifana lokushisa abalawuli asehluleki lapho voltage lehla.
kagesi convector Ukushisa nge control thermostatic, okuyinto kuphela libuyekeza mayelana ngempela ngokuvamile omuhle, kungenzeka ube ngisho nange-elekthronikhi lokushisa ukulungiswa amayunithi. Lokhu kusebenza ikuvumela ukusetha lokushisa ezingeni elithile. Lokhu Ngaphezu kuyasiza ukulondoloza amandla uma akunandaba mqondo ukuchitha imali kwi bafudumale. Iphutha kulokhu 0.1%, okuyinto inzuzo. Okumbi eshiwo ku izindleko aphezulu imishini enjalo futhi ukwehluleka thermostat amaconsi voltage.
Isibonelo imishini nge control electronic lokushisa uyisibonelo BALLU BEP / EXT-1500 Plaza EXT, obiza ruble 5.200. Faka iyunithi kungaba hhayi kuphela phansi kodwa futhi phezu kodonga. Kungaba ukufudumeza igumbi, okuyinto ndawo 20 m 2.
Uphenyo ezinye convectors
Convectors, bafudumale electric ne-thermostat odongeni Nobo, indlela ukuthola, bayakwazi ukusebenza, nje nokugcina izinga lokushisa isethi. Amamodeli Izindaba ezikulolu chungechunge ziye ngezinga eliphezulu of isivikelo okweqile kanye overloads kugridi amandla. Njengoba abathengi ezicijile, wonke amamodeli zenzelwe ukuze lokushisa esiphezulu we panel ingeqi 90 ° C. Lokhu kungabi sengxenyeni amathuba ukubanjwa kwawo ngukushiswa.
Ayikho convectors kancane tech isiFulentshi bafudumale electric ne-thermostat udonga. Njengoba isibonelo, cabanga imodeli Thermor Ubufakazi 2 Elec 750, lapho amandla 750 Watts. Njengoba abathengi bathi kwanele indawo 10 m 2.
Isivinini steel okuphezulu. Amandla ayo kanye ngezigaba
Okuzenzakalelayo emoyeni ukuzwakalisa: idivayisi nokuqashwa
Amagama Afrika - igatsha ekhethekile isiko Afrika
Iresiphi Homemade ngoba isipanji ikhekhe
"Bin Insurance": ukubuyekezwa kanye CASCO imikhiqizo umshwalense
Corrugation ngoba hoods: ukuxhuma idivayisi
Tachycardia e ingane: izimbangela, ukwelashwa. Wezingane Inhliziyo Centre